Mogadishu Journal » 2018 » March » 14
Mjournal :-Xildhibaanada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya oo shalay loo qeybiyay Xeerkii ay maalin kahor soo meelmariyeen Xildhibaanada Golaha Shacabka ee ku aadanaa in dalka laga mamnuucay Shirkadda DP World ayaa maanta ka dooday arintaasi. Xildhibaanada Golaha Shacabka...
Mjournal :-Warar goor dhow aan ka helnay Xarunta Villa Hargeysa ayaa sheegaya inuu guuldareystay isku daygii Xildhibaano ka tirsan Golaha shacabka ay mooshin kalsooni kala noqosho ka geeyeen Guddoomiye Jawaari. Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya inuu jabay mooshinka Jawaari,...
Mjournal :-Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa ka warbixiyay sababta ay Mooshinka uga keeneen Guddoomiye Jawaari, isagoo sheegay inuu hagi waayay howlaha Baarlamaanka u yaalla, kana dhigay meel uu qof leeyahay. Xildhibaan Jeesow oo ka mid ahaa Xildhibaano dhowr ah oo saaka qabtay...
Mjournal :-Xildhibaanada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay loo qeybiyay Xeerkii ay maalin kahor soo meelmariyeen Xildhibaanada Golaha Shacabka ee ku aadanaa in dalka laga mamnuucay Shirkadda DP World. Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa sharci daro ku tilmaamay...
Mjournal :-Raiisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, ayaa xalay ka baaqday kormeer uu doonayay inuu ku maro Isgoysyo ka mid ah Magaalada Muqdisho, kadib markii ay soo kordheen arrimo xasaasi ah oo Siyaasadeed. Ra’iisul Wasaaraha ayaa balamiyay Suxufiyiinta, waxaana loo...
Mjournal :-Qaar ka tirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa Mooshin ka gudbiyay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari), kadib markii saakay ay warbaahinta kula hadleen magaalada Muqdisho. Xildhibaanada oo soo saaray warqad qoraal ah oo ay warbaahinta u...